Endri-pankalazana :: Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina • AoRaha
Endri-pankalazana Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina
Eo am-piomakomanana amin’ireo hetsika fanamarihana ny fetin’ny 14 oktobra 2020, daty fitsingerenan’ny faha-60 taona nahaterahan’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny fitondram-panjakana. Fantatra izao fa mety ho tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fanaovana harendrina, izay tsy natao tamin’ny 25 jona 2020 lasa teo, noho ny fiatrehana ny hamehana arapahasalamana.
Fantatra fa misy sahady ireo orinasa kely mpanao harendrina eto an-drenivohitra no mivonona ny hivarotra ny asa tanany. « Mandray kaomandy maromaro izahay, amin’izao fotoana izao. Izay takatry ny vola ihany aloha no hovitaina satria vao haingana izahay no lany vola tamin’ny fampidirana mpianatra », hoy Razafimahatratra, mpanamboatra harendrina eny Amboditsiry.
Tsy nahazoana antsipirian’ny fandaharam-potoana kosa ny eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, hatramin’ny omaly. « Vao eo an-dalampivoriana izahay », hoy fotsiny Rakotomanga Rinah, talen’ny serasera ao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, tamin’ny alalan’ny antso antariby, afak’omaly.
Fanamboarana ny kianja Barea Vita 90% ny fototry ny « gradins » etsy Mahamasina
Kitra – Lalao ara-pirahalahiana Mpilalaon’ny Barea dimy tany Ejipta tsy ho any Portigaly
Fanomanana ny lalaon’ny barea :: Mifampiandriandry ny Fanjakana sy ny FMF ary i Nicolas Dupuis
Fitakiana ara-dalana :: Manambana hidongy ny fifidianana loholona ireo mpanohitra